ဘိုးအင်း 727-200 အဆင့်မြင့် DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 62.8 ကို MB
downloads ရယူရန္ 54 933
သောမတ်စ်ရုသ်ကယ်အားဖြင့် update ကို
06 / 03 / 2018 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Added GPWS, Panel.cfg, အင်္ဂလိပ်မှဂျာမန်များထံမှ fixed အသေးစား bug တွေကူးပြောင်း, စာရွက်စာတမ်း folder ထဲမှာ 727 စွမ်းဆောင်ရည်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အန့်သတ်ချက်များ PDF ကိုကဆက်ပြောသည်။
04 / 09 / 2017 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: အခုသဟဇာတ Prepar3D v4, Auto-installမူကွဲ ၁၀ ခု၊ ပြုပြင်ထားသောလေယာဉ်ပြောင်းလဲမှု၊ လက်တွေ့ကျမှု၊ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု ပို၍ လက်တွေ့ကျသည်၊ ထုံးစံအတိုင်းအသံများ၊ အခြေခံရာသီဥတုရေဒါ
ဘိုးအင်း 727-200 (Pax နှင့်ကုန်တင်) အတွက်ဇာတိဗားရှင်း advanced FSX SP2 နှင့် Acceleration ။ တစ်ဦး 2D panel ကိုနှင့်ကို virtual cockpit ပေါင်းအလုပ်လုပ်တယ်တ FMC နှင့်တကွကြွလာ! ပစိဖိတ်လေတပ် Express ကို eflp ADVA RSBK (INS) နှင့် HAPAG (FMC): နှစ်ခု repaints ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သဟဇာတ multiplayer ။ ဒါ့အပြင်များစွာသော updates များကိုပါဝင်သည်။ လက်စွဲကိုဖတ်ပါ.
အဆိုပါဘိုးအင်း 727 တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်, လေကြောင်းလိုင်းရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 727 1963 အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ 727 ၏ဒီဇိုင်းဘိုးအင်း 707 ဖို့ဆက်ခံအတွက် configuration အပေါ်ယူနိုက်တက်လေကြောင်းလိုင်း, အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းနှင့် Eastern လေကြောင်းလိုင်းအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်း၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်လေကြောင်းလိုင်းမြင့်မှာလေဆိပ်ရန်၎င်း၏ပျံသန်းမှု, အထူးသဖြင့်ယင်း၏အချက်အချာ Stapleton အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုလေးချင်တယ်။ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းထိရောက်မှုအကြောင်းပြချက်များအတွက်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်လေယာဉ်ပျံချင်တယ်။ Eastern လေကြောင်းလိုင်းကရစ်ဘီယံမှ၎င်း၏ခရီးစဉ်များအတွက်တတိယအင်ဂျင်များအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုံးခုလေကြောင်းလိုင်းများတစ် trijet အပေါ်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ အရှင် 727 မွေးဖွားခဲ့သည်။
Author: သောမတ်စ်ရုသ်ကယ်အားဖြင့် update ကို
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1.03